१० सेकेण्डको भिडियो क्लिप ८० करोडमा बिक्यो, आखिर के छ यो भिडियोमा त्यस्तो ? (भिडियो सहित) – Namaste Host
१० सेकेण्डको भिडियो क्लिप ८० करोडमा बिक्यो, आखिर के छ यो भिडियोमा त्यस्तो ? (भिडियो सहित)
April 3, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on १० सेकेण्डको भिडियो क्लिप ८० करोडमा बिक्यो, आखिर के छ यो भिडियोमा त्यस्तो ? (भिडियो सहित)
अमेरिकी डिजिटल आर्टिस्ट बिपलको एउटा जम्मा १० सेकेण्डकेा भिडियो क्लिप झण्डै ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको छ ।
त्यो भिडियो झ्वाट्ट हेर्दा त्यतिधेरै रकम पर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर, भिडियो यतिधेरै चर्चित भयो कि अन्ततः करोडौँमा बिक्री हुने बहुमुल्य चिज बन्यो ।
वास्तवमा डिजिटल आर्टिस्ट बिपलले बनाएको उक्त भिडियोको अथेन्टिकेसन ब्लाकचेनसँग छ । यस्तोमा जोसँग यसको ओरिजिल प्रति हुन्छ उसको डिजिटल सिग्नेचरबाटै त्यो खुल्दछ । यसलाई नन फंगेबल टोकन अर्थात् एनएफटी पनि भनिन्छ ।नायक अनमोल केसीको प्रेम चर्चा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि नयाँ भने होइन । किनकी अनमोल जुन चलचित्रमा काम गर्छन् उनको नाम सोही चलचित्रकी नायिकासँग जोडिन्छ । उनको प्रेम जेरी नायिका आना शर्मासँग रहेको बताइन्छ । दुबैले प्रेम स्विकार गरेनन् । यसपछि विभिन्न नायिकासँग अनमोलको नाम जोडिएपनि उनले स्विकार भने गरेका छैनन् ।
सुनकाे भाउ दिनहुँ सोच्नै नसक्ने गरि घट्न थाल्याे, तोलामा कतिसम्म आइपुग्ला ?